नित्य पूजामा सीमित हुँदै यो वर्षको माधवनारायण जात्रा
माघ महिनामा भीडभाडको बीचमा मनाइने माधवनारायण जात्र यो वर्ष नित्य पूजामा सीमित हुने भएको छ । ऐतिहासिक रुपमा हेरिने साँखुको व्रत पार्वतीले भगवान् शिवलाई पतिका रुपमा पाउनका लागि बस्नुभएको थियो । माधवनारायण व्रत तथा नदी सुधार समितिका अध्यक्ष, मिजेन्द्रकाजी श्रेष्ठका अनुसार भगवान माधवनारायण मूर्ति चार सय ३७ वर्ष पुरानो हो । माधव नारायणको मूर्ति यहाँ व्रत बसिसकेपछि एकछिन साल्खा टोलमा राखिन्छ । ‘शिलालेखमा लेखिएको...
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीमा एक समय रौतहटको दबदबा थियो । रौतहटको त्यही फुटबल माहोलबाट उठ्नुभएकी अनु लामाले नेपाली महिला फुटबलमा तहल्का नै मच्चाउनु भयो । पूर्वकप्तान अनु सावित्रा भण्डारीपछि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुनुहुन्छ । यसअघि अनुको नाममा राष्ट्रिय टोलीबाट ३५ गोलको कीर्तिमान थियो । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पछि अनुको नाममा रहेको उक्त कीर्तिमान भण्डारीले तोड्नु भएको हो ।
समयपूर्व जन्मिएका शिशुको हेरचाह कसरी गर्ने ?
गर्भावस्था सामान्यतयाः नौ महिना अवधिको हुन्छ । नौ महिनासम्म पूर्ण रुपमा विकसित भएर जन्मिएको बच्चा स्वस्थ्य हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नौं महिनाभन्दा अगावै बच्चा जन्मिनेक्रम बढदै गइरहेको छ । गर्भ रहेको ३७ हप्ताभन्दा पहिले नै जन्मिएको बच्चालाई प्रिटर्म बेबी भन्ने गरिन्छ । यस्ता बच्चा जन्मिदै तौल कम हुन्छ । उनीहरुको शारीरीक र मानसिक विकास भएको हुँदैन । यस्ता बच्चालाई अन्य बच्चाको तुलनामा स्याहार बढी मात्रामा गर्नुपर्ने...
कपाल प्रत्यारोपणको विधि के हो, कसरी गरिन्छ ?
सिर्जना खत्री पुष १५, २०७८ बिहीबार
स्वस्थ र सुन्दर कपाल महिला र पुरुष दुवैको पहिचान हो । हाम्रो समाजमा कपाल झरेर मानिसको स्वरुप नै परिवर्तन भएका थुपै व्यक्ति देख्न सकिन्छ । विशेष गरेर पुरुषलाई कपाल झरेर ताक्ले हुने समस्याले सताउने गरेको छ । कपाल झरेर स–साना बालबालिका साथीभाइले जिस्काउने डरले टाउँकोमा क्याप, रुमाल बाँधेर हिड्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।
जाडोमा ज्येष्ठ नागरिककाे स्याहार कसरी गर्ने ?
गोरखापत्र अनलाइन मंसिर २९, २०७८ बुधबार
ज्येष्ठ नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने हुँदा जाडो मौसममा स्वास्थ्य समस्या बढी देखिने गर्छ । जाडो समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया, दम, उच्च रक्तचापका साथै अन्य दीर्घरोग बढ्ने ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा.रमेश कँडेले जानकारी दिनुभयो । डा कँडेलका अनुसार जाडोमा जोर्नीसम्बन्धी समस्याले पनि धेरै दुःख दिनेगर्छ ।